China abicah Kitchen Izinto mveliso kunye nabenzi | SJJ
Izinto ze-silicone zithandwa ngakumbi kwihlabathi liphela ngoku. Ngelungelo layo elenziwe ngezinto zokutya ze-silicone kunye nokukwazi ukuthwala ubushushu ukusuka -50 ukuya kuma-300 degrees Fahrenheit, abantu benza izinto ezininzi ezifanelekileyo ukuzisebenzisa eKhitshini.
Izinto ze-silicone zithandwa ngakumbi kwihlabathi liphela ngoku. Ngokwenza kwayo izinto ezenziwe nge-silicone yokutya kunye nokukwazi ukuthwala ubushushu ukusuka -50 kuye kwi-300 degrees Fahrenheit, abantu benza izinto ezininzi ezifanelekileyo ukuzisebenzisa eKhitshini.
Izipho zethu eziMhle ngokuKhazimlayo zinezinto ezininzi ezikhoyo ezinje ngezitya zesilicone kunye neepleyiti, iimethi zepleyiti yesilicone, iingqayi zesilicone, izivalo zebhotolo zesilicone kunye nezembozo, iipuni zesilicone, iipanishi zokubhabha zesilic, iifaneli zesilichus, iibrashi zokucoca abicah njalo njalo. Ngaphandle kwemisebenzi, iilogo zinokwenziwa kwizinto zekhitshi zesilicone zokwazisa, ukubhengeza, ishishini kunye nezipho ngokushicilelwa, kugqitywe kwibhokisi okanye kulahlwe imibala okanye ngaphandle kwemibala. Iqela lethu lobugcisa lizama ukwenza izinto ezininzi ukuhlangabezana neemfuno zabathengi. Uyilo elungelelanisiweyo lwamkelwa nangaliphi na ixesha. Siqinisekile ukuba izinto zekhitshi lesilicone ziya kuba luncedo kulwandiso lweshishini lakho.
Iimathiriyeli: Izinto zohlobo lweSilicone
Uyilo kunye nobukhulu: 2D okanye i-3D, intlawulo yokubumba yasimahla yoyilo lwethu esele sikhona,
uyilo esingabizi bamkelekile.
IiLogo: IiLogo zinokuprintwa, zifakwe ebhodini okanye zilahlwe ngombala okanye ngaphandle kombala
Ukuncamathisela: Imitya, imitya, imisesane yesitshixo, imixokelelwane ephambili, amagwegwe okanye ukulandela umthengi
MOQ: Xoxa ngemeko yetyala
Egqithileyo Iikomityi zeSilicone ezisongelayo
Okulandelayo: Abanye abicah
I-Tin Plate Iibhokisi zeMali
Izikhonkwane ze-LED ezidanyazayo
Indebe ye-Silicone eQhekezayo